Sirta faylalka wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
Xayeysiinta Waa hubka ugu fiican ee aan isku halleyn karno marka aan shaqo raadineyno oo aan aqoonsigeenna ku dhiseyno qaab adag oo guul leh. Waxay noqon doontaa daaqada aan ku soo bandhigi karno xulasho mashaariic aan annaga abuurnay taasna waxay noqotay guul. Qormooyinki hore waxaan kagahadalnay arinkaan laakiin waa run oo waligeen kumaan dheeraan dhanka istaraatiijiyada ugu badan. Inaga oo na garanaya ayaa lagama maarmaan u ah ognahay sida wanaagsan ee aan nafteena u iibin lahayn. Ogow taariikhdeena, kartida aan leenahay iyo aqoonta aan ku biirin karno shirkad. Laakiin wax walba halkan ma joogaan, innaga oo noo garanaya innagoo xirfadleyaal ah ayaa aad muhiim u ah, laakiin waxaa xitaa ka sii muhiimsan in la ogaado shirkadaha iyo mashaariicda aan dooneyno inaan ka mid noqonno.
Sidaa darteed, maanta waxaan qaadan doonaa fursad aan ku siiyo xoogaa tilmaamo ah oo si fiican u socon kara marka aad diyaarinayso jagooyinkaaga iyo ka shaqeynta sawirkaaga sida naqshadeeyayaasha, farshaxanada iyo gaar ahaan maskax maskaxeed:
Kahor intaanan bilaabin waxaan ku xasuusin lahaa inaad booqan karto qormooyinkan oo wax badan ka tari kara arrimahaan oo dhan:
Kaargo-ururinta: Beddelka wanaagsan ee looga shaqeyn karo Portoflio-kaaga
Xilalka xirfadleyda adduunka naqshadeynta
Dhiirrigelinta Dib-u-habeynta Hal-abuurka ee Naqshadayaasha Sawirka
Fiidiyow xiiso leh oo yaab leh ayaa dib u bilaabmay
Mawduucyada dib u bilaashka ah ee loogu talagalay maskaxda hal-abuurka ah
Tilmaamaha sida loogu noolaado sida naqshadeeye naqshadeeye madaxbanaan
Talooyin ku saabsan abuurista faylalka internetka ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka
1 Kumaad tahay Xagee u socotaa
2 Waa maxay yoolkaagu?
3 Nooca ugu fiican naftaada
4 Fikrad kasta oo la gashado waa guul, ula dhaqan sida oo kale
5 Naqshadee ugu yaraan laba nooc oo faylalka faylalka ah
Kumaad tahay Xagee u socotaa
Waxaa jira shirkado iyo wakaalado lagu tilmaamo inay aad ugu xoogan yihiin meelaha qaar, waxay ku takhasusaan iyaga, in ka badan kuwa kale. Adiga, sida shirkad kasta, waxaad leedahay astaamo gaar ah, xirfado iyo karti. Himiladaadu waxay noqon doontaa inaad hesho mashruucyo ama shirkado u dhigma astaantaada. Aad ayey muhiim u tahay inaad fiiriso badeecooyinka iyo adeegyada ay bixiso shirkadda aad rajaynayso inaad ka mid noqoto.
Samee liis ku saabsan meelaha qibrada u leh oo aad u maleyneyso inaad si fiican u hadli karto iyo halka aad uga shaqeyn karto si hufan. Marka xigta, baari in baahiyaha mashruuca la bixinayo ay barbar socdaan khibradaada iyo xirfadahaaga. Booqo websaydhka shirkadda, fiiri buug-yaraheeda, mashaariicdiisii ​​hore ...
Waa maxay yoolkaagu?
Haddii barta koowaad aad ku ogaatay inay jiraan qodobo caam ah oo aad uga faa'iideysan karto dhinacaaga, waa waqtigii loo gudbi lahaa wejiga xiga. Hadda waa inaad ujeeddadaada ku qeexdid si cad oo gebi ahaanba la taaban karo. Ujeedadani waxay si buuxda u noqon kartaa inay gacan ka geysato hal-abuurkaaga iyo aqoontaada barnaamij ama xirfad gaar ah ama tusaale ahaan in la siiyo xirmo gaar ah oo loogu talagalay SME ee alaabooyin iyo adeegyo dhowr ah ...
Waxay kuxirantahay ujeedada aad leedahay, galkaaga ayaa isbadal ku sameeyn doona tan tanina waa tan qaasatan waxa naqshadeeye kasta ay tahay inuu raadsado. Haddii aad ku guuleysatay inaad heerkan gaarto, waxaad horeyba ugu guuleysatay inaad ka go'do tirada badan ee soo jeedinta ee gaari doonta shirkadda.
Nooca ugu fiican naftaada
Xullo ugu badnaan shan mashruuc oo waafaqsan ujeeddada la soo jeediyey, kuwaas oo helay natiijada ugu wanaagsan isla markaana gaadhay himilooyinkii la rabay. Waqtigu aad buu qiimo ugu leeyahay qofka go'aan ka gaari doona inuu ku doorto ama ku shaqaaleysiiyo mashruucooda, marka waa inaad isku daydaa inaad si cad u qeexdo inaadan ka badin duurka oo aad soo bandhigto mashaariic gebi ahaanba kaabaya shirkadda la sheegayo.
Fikrad kasta oo la gashado waa guul, ula dhaqan sida oo kale
Markaad soo bandhigayso soo jeedintaada, waa inaad sharraxdaa faahfaahinta ugu xiisaha badan ee habka hal-abuurka. Laga soo bilaabo warbixinta kooban ilaa qiimeynta natiijooyinka, waa wax ay tahay inaad ula dhaqanto si faahfaahsan, soo koobid iyo xarrago leh. U soo bandhigidaada soo jeedintaada saamayn aad u weyn oo wanaagsan una soo bandhigo guul ay tahay in la gaadho oo aad gaadhayso waxay ku kalifaysaa kooxda maamulka inay si dhab ah u qaataan soo jeedintaada. Tani waxay aad uga sii fog tahay shaashadda fudud, tani waa in lagu muujiyo arsenal-kaaga ilaha iyo fursadaha.
Naqshadee ugu yaraan laba nooc oo faylalka faylalka ah
Waa inaad leedahay habab kala duwan oo aad isku baratid. Ugu yaraan waxaan horeyba kuugu sheegayaa in labadu noqon doonaan kuwa ugu habboon. Midkood iyaga oo adeegsanaya barxad bulsheed sida Dribble ama Behance. Tani waxay ku siin doontaa awood aad ku muujiso naftaada hab dhaqso badan oo hufan si aad isugu muujiso inaad tahay qof hal abuur leh waqti gaaban.
Feylka labaad waa inuu ahaadaa mid aad u ballaaran, kuna jira PDF ama qaab daabacan. Tan waxaad ku heli doontaa xorriyad aad u weyn oo aad si faahfaahsan ugu sharraxdo sheekooyinkaaga guusha isla markaana dhexdeeda waa inaad ka taxaddartaa faahfaahin kasta (naqshadeynta, aqoonsigaaga garaafka ah ...)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sirta faylalka tacliimeed ee wanaagsan
Soo qaado xirmadan dulinka ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay isticmaalkaaga shakhsi ahaaneed si aad u abuurto shaxda ugu fiican